Somaliland: Warancadde Oo Ku Gacansaydhay Inuu Qabto Xilka uu Madaxweyne Silaanyo Xalay U Magacaabay Ee Safiirka Somaliland U Fadhiya Itoobiya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Warancadde Oo Ku Gacansaydhay Inuu Qabto Xilka uu Madaxweyne Silaanyo Xalay...
Wasiirkii Hore Arrimaha Guddaha Md Cali Maxamed Warancadde, Oo xalay Madaxweyne Siilaanyo u Magacaabay Safiirka Somaliland U Fadhiya Itoobiya, ayaa si rasmiya u diiday inuu qabto xilkaas, isagoo kugacansaydhay qabashadda xilkan xalay Madaxweynuhu u magacaabay.
Ex Wasiir Warancadde ayaa xalay Madaxweyne Siilaanyo xilkii Wasaaradda Arrimaha Guddaha ka qaaday, isagoo u dhiibay Danjiraha Somaliland u fadhi doona dalka Ethiopia taas oo uu diiday inuu qaato xilkaa madaama uu hayn jiray xilal sare oo wasiirnimo u yar tahay.
Wasiir Waran-cade, ayaa xilkan loo dhiibay ku tilmaamay in aanu aqbali Karin qabashadiisa, isagoo xusay in aanu diyaar u ahayn inuu qabto, isla markaana uu u arko mu’aamarad dalkiisa lagaga mustaafurinayo. Md Waran-cade sheegay inuu Madaxweynuhu ku mahadsan yahay inuu u magacaabo xilkan, balse aanu diyaar u ahayn inuu qabto, isla markaana cid kale u dirto shaqadan. Sida ay ilo ku dhow Waran-cade u xaqiijiyeen Shabakedda Caalamiga ah ee Qumannews.com, ayaa xusay inuu Ex-wasiir Waran-cade mar dhow uu war-baahinta la hadli doono sheegi doonana in aanu diyaar u ahayn qabashadda xilka Safiirka Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, Wasiirkii Hore Arrimaha Guddaha Md Cali Maxamed Waran-cade, ayaa xalay ka mid ahaa masuuliyiintii ay sahayatay seeftii Madaxweynuhu, waxaanu noqonayaa masuulkii ugu horeeyey ee durba diiday xilka cusub ee Siilaanyo xalay u magacaabay.